राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन हुम्लालाई अझै दुई वर्ष लाग्ने - Sankalpa Khabar
3. मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य
4. भारतमा कोरोना संक्रमण १० दिनमै दोब्बर, एकै दिनमा २ लाख भन्दा बढी संक्रमित
६ चैत्र १४:४६
काठमाडौँ । सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी रहेको देशको एकमात्रै जिल्ला सदरमुकाम हुम्लाको सिमकोट चालु आर्थिक वर्षमा पनि सडक सञ्जालमा नजोडिने भएको छ ।
सडक विभागका अनुसार अहिलेको गतिमा काम हुँदा सिमकोटमा सडक पुग्न अझ दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सो राजमार्गमा सडक विभाग र नेपाली सेना दुवैले निर्माणको काम गरिरहेको छ । सडक विभागले निर्माण गरिरहेको खण्डमा १६ किमी साधारण बाटो खन्न बाँकी रहेको विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले बताए । सो खण्डमा विभागले निर्माण गर्दा ढिलाइ भइरहेकाले सेनालाई नै निर्माण गर्न भनेको थियो । त्यसको टुङ्गो नलागेकाले अहिले विभागले नै सुस्त गतिमा काम गरिरहेको छ । विभागले निर्माण गर्दा पनि विष्फोटनको काम सेनाले गर्नुपर्ने भएकाले सेनालाई नै जिम्मेवारी दिन फाइल अघि बढाइएको उनले बताए । उनले भने “रक्षा मन्त्रालयमा फाइल पठाएको भएपनि त्यसको टुङ्गो लागेको छैन ।”
कुनै पनि सडकमा चट्टान फोरेर निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ सेनाले उपलब्ध गराउने गर्छ । सो सडकमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सेनाको टुकडी निर्माणस्थलबाट टाढाटाढा रहेका छन् । त्यहाँबाट निर्माणस्थलसम्म सेनालाई ल्याउँदा ढिलाइ हुने उनले बताए। उनले भने, “निर्माणस्थलमा टुकडी नराख्दासम्म निर्माणले गति लिँदैन ।”
राजमार्गमा निर्माणसँगै सडक विस्तारको काम अघि बढाइएको छ । हिल्सादेखि सिमकोटसम्म ३५ किमी चौडा गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले गर्न सकिने ठाउँमा विस्तार गर्ने र अप्ठेरो ठाउँमा पहिले ट्याक खोलिसकेर मात्रै सडक बिस्तार गर्ने योजना बनाइएको उपमहानिर्देशक नेपालले बताए। हिल्सादेखि सिमकोटसम्म ९० किमी सडक ट्याक खुलाइएको उनले बताए। सोही खण्डमा ४०० मिटर भने डिजाइनअनुसार खन्न नसकिएकाले चौडाइ कम छ र ग्रेड पनि नमिलेको उनले बताए ।
सो सडकमा बजेटको भने समस्या नभएको विभागले जनाएको छ । गत आवमा सो सडकका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च भएको थिएन । चालु आवमा पनि छुट्टाइएको बजेट खर्च भइसक्ने नदेखिएको उपमहानिर्देशक नेपालले जानकारी दिए। सडकमा जग्गाको समस्या आउने गरेपनि निर्माण नै रोकिने अवस्था छैन ।
सेनाले निर्माण गरेको स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काम सकिनै लाग्दा विभागले निर्माण गरेको स्थानमा भने कहिलेसम्म खुलिसक्छ भन्नेमा विभाग प्रष्ट छैन । विभागले निर्माण गरेको ठाउँमा पनि विष्फोटक पदार्थ सेनासँग किनेर र उनीहरुकै सुरक्षामा निर्माणस्थलमा पुर्याउनुपर्छ । सेनासँगको सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने भए पनि यो काम सेनाको प्राथमिकतामा त्यो काम नभएको उपमहानिर्देशक नेपालले बताए। अहिले निर्माणस्थलमा छुट्टै टुकडी व्यवस्था नभएर अरु काममा खटिएकालाई समय समयमा निर्माणस्थल लैजाने गरिएको छ । सेनालाई निर्माणस्थल लगेर केही दिन काम गरेर फर्कने र पुनः विभागले सो स्थानमा सफा गरेर अर्काे पटक बोलाउने गरेको उनले बताए । उनले भने “टाढाबाट धाएर जाँदा महिनामा दुईतीन पटकभन्दा विष्फोटन गर्न सकिएको छैन ।”
सेनाले निर्माण गरिरहेको खुलालुदेखि सलिसल्ला १२३ किमी सडकको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो सडक सेनाले चालु आवमा नै हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । सलिसल्लादेखि सिमकोटसम्म ५० किमी सडक निर्माण विभागले गरिरहेको छ । विभागले सलिसल्लाबाट सिमकोट र सिमकोटबाट सलिसल्लातर्फ गरी दुवैतर्फबाट काम गरिरहेको छ । विभागले ३४ किमी ट्रयाक खोलिसकेर बीचमा १६ किमी सडक खन्न बाँकी छ । ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँ पूरै चट्टानी भाग नभएर कतै चट्टान र कतै सजलो जमिन छ तर बीचको सजिलो भागमा पुग्नु पहिले चट्टान फोरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले धेरै क्षेत्र ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको उनले बताए । उनले भने , “बीच बीचको सजिलो ठाउँमा पनि काम हुन सकिरहेको छैन ।”
राजमार्ग आठ मिटर चौडाइ कायम गर्ने गरी काम भइरहेको छ । पहिले ट्रयाक खालिसकेर चौडाइ बढाउन सकिने भएकाले अहिले धेरै ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने काम पहिले भइरहेको विभागले जनाएको छ । राजमार्गमा कतिपय पुल निर्माणाधीन छ भने कतिपय डिजाइनको क्रममा छ । सडक ट्रयाक खुलेपछि पुलका लागि आवश्यक सामग्री पुर्याउन सकिने भएपनि अहिले पुल निर्माण गर्ने स्थानसम्म निर्माण सामग्री पुर्याउन गाह्रो भएको उपमहानिर्देशक नेपालले बताउनुभयो । आवश्यक उपकरण बोकेर नसकिने र हेलिकप्टरबाट लैजाँदा खर्चिला हुने भएकाले निर्माण अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सडक निर्माणमा आवश्यक इन्धन पहिले चीनबाटै ल्याउने गरिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण अहिले भने इन्धन उताबाट ल्याउनसमेत समस्या भएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारबारे निर्णय गर्न देउवाले आज बोलाए पदाधिकारी बैठक
२९ चैत्र ०९:३०
कांग्रेसको प्रस्तावबारे छलफल गर्न जसपाको पदाधिकारी बैठक सुरु
२९ चैत्र १४:४७
नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन : सकेसम्म लकडाउन गर्ने…
१ बैशाख १०:०९
अब कांग्रेसलाई कुनै ताकतले हराउन सक्दैनः पूर्वमन्त्री बस्नेत (फोटो…
२८ चैत्र १९:३१
सिंगटी हाइड्रोपावरको आइपिओ बाँडफाँड, २ लाख ६९ हजार ७००…
२७ चैत्र १३:१८
कांग्रेसको छवी बदलेर सङ्गठनात्मक स्वरुप बदल्नु आवस्यक छ :…
२८ चैत्र १३:२२